Dubartiin eega Islaamummaan Dhuftee bakka isiin qabdu
Eega Islaamummaan dhuftee rorroon dhalaarratti deemuu turte hundi dhaabbatedhalaan nama hundaa waliin waqixoyte dhalaan hundi namummaa isiitiin akkakhabajamtu islaamummaan isiif fidde akka Rabbiin oltahe ja’e “ Yaa ilmaan nama nuti dhiiraafi dhalaarraa isin uumne ” Rabbiin oltahe jalqaba ilma namaa uumamuutu walqixa godhe beekkamadha ilmi nama yoo dhalan hinjiraannekhophaa dhiirti qoftiin fiduu hindandeessu dhalaa jachuun haadha Anbiyaati,haadha Sahaabaati, haadha dhiiraati,haadha ummata gaggaariiti tanaafu akkuma Islaamummaan isaan khabjetti khabajamuu qaban.
Rabbiin oltahe sawaabaafi qixaaxa dhiiraafi dhalaa walqixa godhe akkuma aayaa Qur’aanaa kheysatti ja’etti “ Namni toltuu dalage dhiira yookhaa dhalaahaatahu haala khan Rabbitti amanu taheen jiruu gaarii isaan jiraachifna galataisaanii isaaniif galachina irra gaarii waan isaan dalaganii ”
Rabbiin oltahe akka ilma namaatii mitii ati dhalaa dhaa xiqqo dhiira booda aani haga dhiirti sibira dabartuu hinja’u. abbumaan fedhe dhiiraa tahee dhalaa tahee kan toltuu dalage Rabbiin walhin caalchisu qixaaxa kheysattiis akkuma sani akkuma ayaa Qur’aanaa keysatti ja’etti “ Rabbiin ni’adaba munaafiqtichaafi munaafiqtittis, mushrikaafi mushriktittiis.” Rabbiin oltahe roorroo ummanni kaafiraa dhalaarratti oofu hundaahuu irraa deemsisee kan isaan dhalaa jarsi irraa du’e osoo isiin hifeene dirqiidhaan dhalaa akkuma aayaa Qur’aanaa kheessatti ja’utti “ Yaa warra Rabbitti amantan dhalaa dhaaluun(tan jaarsi irraa du’e) halaal isiniif hintaatu osoo isiin jibbituu .”
Akkuma san haqa isii khan dhaalamaa isii gehu kan isaan haan geeysan cufaahu isaaniif argamsiise sababaa shari’aa Islaamaatiin akkuma ayaa Qur’aanaa keysatti ja’utti “ Dhiiraaf qoodaatu jiraaf waan haadhaa, abbaa fi waan aanaan sanii dhiisee firraa dhalaafis qoodaa jiraaf waan haadha, abbaafi waan aanaan sanii dhiiseefirra sanirraa xiqqaatu guddatu qooda dirqamaatu jiraa.” Kharaa dhalaa fuudhuudhaatiinis dhiirti takka takka dhalaa afurii ol fuudhuuhindandeenye sanuu sharxii takkallee walhincaalchisneen yoo kan haqa isii eeguu hindandeenye taate takkaa ol fuudhuun isarratti dhoorkaa dha takkitti sanuu haala nagayaatiin akka aadaatti akka walii jiraatan.
Akkasuma mahrii isii osoo waa takka irraa hin irrisin guutuu kennuufii qabayoo isiin fedhii isiitiin isaaf dhiifte male yaroo san humaa hin qabu.
Ammallee mana isii kessatti waan hundaa isii jalatti akka isiin tiisitu sadarkaakenneefi jiraa akkuma ergamaa Rabbi (NRIH) ja’etti “ Intaloo mana jaarsi isiirratti tiisitee dha, waan tiisisiturraahis gaafatamtuu dha